Kuchengetera Bhokisi Dhizaini Yemawiricheya - Wiricheya Bhegi
Saka wakatenga wiricheya itsva uye hapana kumwe kwaunochengetera zvinhu zvako. Kana chigaro chako chisina kuuya neimwe mhando yebhegi kana bhegi, kana kana upholstery isina kutsemuka kana bhegi rinouya rakajairwa, unogona kunge uri mumusika wezvekuchengetera wiricheya.
Kune akawanda akasiyana marudzi emabhegi nemapochi aripo kunze uko, mazhinji aunogona kuhodha kuburikidza nemugadziri mumwe chete wewiricheya yako, uye mamwe aunogona kutenga kuburikidza nevechitatu bato vanogovera.
Kurutivi Arm Homwe
The side armrest pouch kana bhegi rinowanzoenderana pane armrest (chero divi) ine Velcro attachment. Iyi ndeimwe yemhando dzakajairika dzemidziyo yekuchengetera mawiricheya sezvo yakakura zvekuti nharembozha nezvimwe zvidiki zvaungade kuuya nazvo paunenge uchienda.
Pasi peSeat Bhegi
Zita rinotaura zvese; mudziyo wekuchengetera unogara pasi pechigaro checheya yako. Rudzi rwechigaro chehombodo chinowanzo hombe kupfuura bhegi rekuchengetedza. Inowanzo gara kubva kune cheya cheya kuenda kune imwe.
Rudzi urwu rwehombodo rwakakosha kana iwe wajaira kuita marefu kuenda, izvo zvingangoda zvinobatsira zvakawanda kupfuura avhareji rwendo.
Sekuenda kwekuchengeteka, bhegi iri ndiro rakachengetedzeka riripo nekuda kwekuti iro bhegi rinenge riri pasi pechigaro chako, unogona kuchengeta zviri nyore bhegi rako nguva dzese uye sezvo riri pasi pechigaro unogona kuviga nyore iwe vari panze kana mumugwagwa.
Seri kweHomwe Yekumashure
Zvimwe zvigaro zvinouya zvakajairika nerudzi urwu rwekuchengetedza mudziyo; iyo zvakare dzimwe nguva inosungirirwa kune iyo upholstery.
Rudzi urwu rwekuchengetedza nzvimbo yakakura zvakakwana kuti ikwane laptop, asi yakangwara uye yakaderera profil kubvumira mushandisi kuisa yakakosha imomo pasina kukwezva kutarisisa.